Sidee loo abuuraa backlinks habka ugu wanaagsan?
Sida muuqata, khubarada SEO ugu badan iyo bilawga internetka waxay xoogga saaraan dadaalkooda ku aaddan sidii loo heli lahaa dib u habeyn wanaagsan. Su'aashu waxay tahay sababta ay diiradda u saarayaan dhismaha isku xidhka halkii farsamooyinka kale ee wax soo celinta? Aniga ahaan sida qof takhasus leh SEO, jawaabta waa cad. Qof kasta oo raba in uu kordhiyo darajooyinka ku jira shuruudaha raadinta tartan, wuxuu u baahan yahay inuu abuuro xiriir xooggan oo xooggan. Haddii kale, ma jiraan wax dhib ah oo lagu abuurayo ganacsi online sababtoo ah dadaalkaaga ma qadarin doono macaamiishaada iman kara.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa haboon in la sheego in aan dhabarka dambe la abuurin si isku mid ah. Waxaa jira dad badan oo madow ah "SEO specialists" kuwaas oo jeclaan lahaa in ay ciyaaraan matoorada raadinta oo ay siiyaan waxyaalla macquul ah. Taasi waa sababta aad u taxadarayso markaad raadineyso fursadaha dhismaha ee isku xirkaaga. Waxaad u baahan tahay inaad ka fogaato beeraha xiriirka, ilaha isku xirka spammy iyo shirkadaha sameeya xiriiro dibadda ah. Dhammaan dhammaan farsamooyinka dhismaha ee khadka la xidhiidha waxaa lagu ogaan karaa Google. Xaaladdan oo kale, goobtaada waxay ku siin doontaa ciqaab halkii ay ku xiran lahaayeen casiirka. Su'aalaha ugu horreeya ee ku saabsan xirfadlaha bilowga ah ee SEO wuxuu yahay "Waa maxay qaabka ugu wanaagsan ee loo abuuro tayada iyo dib-u-dhaqaleedka dabiiciga ah?" in la yiraahdo jawaabta su'aashan wali way adag tahay in la helo khibradaha websaydhka khibrad leh.
Haddii aad google ka dhigto, waxaad ka heli doontaa xeelado aasaasi ah oo badan, kuwaas oo intooda badan aan haysan qiime isku mid ah waa horay. Waxaa lagu sharxi karaa isbeddelada joogtada ah ee suuqa dijitalka ah oo horseedi kara siyaabo cusub oo waxtar leh oo dib loogu helo.
Qodobkani waxaan ka wada hadli doonnaa kaliya hababka ugu fiican iyo hababka cusub ee aad u abuuri kartid dib u eegis tayo leh. Farsamooyinka dhismaha ee xiriiriyeyaashu waxay joogi doonaan dhab ahaan sanadka soo socda. Sidaa daraadeed aan ka wada hadalno xeeladaha shaqada hadda.
Siyaabaha ugu fiican ee loo abuuro backlinks
Isticmaalayaasha waxay dareen iyo ammaan. Waxaa si dabiici ah loo wadaago internetka sababtoo ah tayada sare iyo faa'iidada. Taasi ugu fudud oo habka ugu wanaagsan ee loo abuuro dabeecada dabiiciga ah waa farsamooyinka maaddooyinka ku haboon ee khuseeya warshadahaaga mawduucyada ah in dadku ku raaxaystaan ​​wax badan oo ay ku soo qoraan, sida, blog, iyo faallooyin aad ku dari karto sare ee bogga natiijada raadinta keywords keywords ah. Isticmaal bacda isku-xirka oo aad abuurto mawduucaaga iyadoo la tixgelinayo dadka dhagaystayaasha ah. Haddii aad samayn kartaa si joogto ah, idinkaan idin raacaynay ee joogto ah iyo cusub badalo doonaa macaamiisha joogtada ah iyo bixinta, samaynta aad brand caanka ah ee Misbaax.
Qodobbada soo gudbinta
Ha rumaysanin dadka sheeganaya maqaalada marketing. Dhab ahaantii waxay weli ka shaqeysaa ganacsigaaga ugu fiican. Suuqgeynta suuqyadu waa mid ka mid ah istaraatijiyadaha dhismaha ee ugu muhiimsan ee ay isticmaalaan suuqyada iyo khabiirada SEO-yada maalmahan.
Qodobka muhiimka ah ee suuq-geynta suuqa waa mugga. Waa inaad sameysid tiro aad u tiro badan, si aad u heshid boqolkiiba sare ee dhabarka. Waa inaad diyaar u noqotaa in aad soo gudbiso waxyaalo dhawr ah oo aanad kuxusin doonin boggaaga habeenki. Waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u sameyso soo gudbin si aad u hesho natiijada la rabay.
Si loo fududeeyo nidaamka soo gudbinta, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka internetka oo si toos ah u samayn kara. Tusaale ahaan, Qodobka Suuq-geynta Ganacsi ee Suuq-geynta wuxuu kuu qaban doonaa wax kasta oo kugu habboon si aad u fiican. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad ku darto macluumaadkaaga oo u ogolaato Source .